Omeo vehivavy hendry aho...
2008-10-15 @ 22:39 in Finoana
...hananganako firenena vanona. Noheveriko ho teny ao amin'ny baiboly izy io; kanjo diso hevitra aho. Tenin'olona tsotra izy io. Tsy nahita azy io tao amin'ny baiboly aho, na izaho no tsy nahay nikaroka azy...nefa nandany fotoana ihany hijery azy tao amin'ny kônkôrdansa. Amin'ny ankapobeny anefa dia nampidirina ho anisan'ny soatoavin'ny mpandala ny baiboly ny teny ary matetika no karazana atao ho lohahevitra mihitsy aza. Ekeko ny fahamarinan'ny teny sy ny lanjany. Tsy mba tahaka izany kosa anefa fa laviko kosa ny fanandratana ny teny hoe "Ampio ny tenanao dia hanampy anao ny lanitra"na ny "Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany". Fa mitady hivaona amin'ny resaka tiako fotorina aho izany.
Mametraka sahady fa ny vehivavy hendry no fototry ny firenena vanona. Ny vehivavy manko no miteraka ary mahatsapa ny vesatra sy ny fijalian'ny fiterahana. Rehefa tontosa anefa ny andro iterahana ka tonga ny zaza, iny no lasa mamy indrindra ho an'ilay niteraka azy. Mamy tena mamy raha zanaka niriana fa fanorisorenana kosa raha vohoka azo tsinahy noho ny fahafinaretana fotsiny ihany. Taonjato anjakan'ny fahafinaretana tokoa izao iainantsika izao nefa miara-dalana aminy ihany koa ny voninahitra. Matetika raha misy ny vohoka tsy nirina na ivelan'ny fanambadiana nefa mba manana ny hajany ihany ny ray aman-dreny no karohana mandrakariva izay hanalana iny zaza am-bohoka iny. Lasa ambany noho ny voninahitra na ny fahafinaretana ny aina. Ny aina izay sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Te-hahalala anefa aho etsy ankilan'izay hoe firy isan-jaton'ireny nanala zaza ireny no nanenina tamin'izay nataony avy eo? Raha olona tsy mahalala afa-tsy ny fahafinaretana aloha mety tsy hanenina mihitsy, mitohy am-pilaminana indray manko ny revy. Fa raha olona notezaina ho olom-banona ihany na tonga amin'izay amin'ny faniriana hananjanaka amin'izay no lasa afa-jaza hatrany avy eo? Deraiko manokana noho izany ny vehivavy nisafidy ny hitazona ny zanany na dia nofitahin'ny sakaizany nanaovana filan-draha tsy mahita fotsiny aza. Tsy miresaka fandrindram-piterahana ivelan'ny voajanahary kosa indray aho.
Manaraka izany, eto ampanoratana aho no mahita fa toa mifandaka ny fahafinaretana sy ny fandraisana andraikitra hametraka fanorenana maharitra sy mitohy. Efa manjaka amin'ny Tandrefana sy ny mpandala faratampony ny kolontsainy miridana toa soavaly tapa-kofehy fa tsy maharitra velively izany fanambadiana izany. Resaka fahafinaretana ara-pananahana sy fianohana anaty vola aman-karena no heveriko ho fototr'izany. Ny tsapan'ny olon-dehibe ihany no lanjalanjainy, ny fitiavan-tenany hikaroka hatrany ny fahafinaretany no asandratra hany ka tsy noheverina velively tao anatiny ny ratram-po mahazo ny zanaka iharan'ny fisarahan'ny ray aman-dreny. Mizaka ny safidin'ny fitsarana amin'izay hitaiza ny zaza sisa no mba zon'ny ankizy.
Omeo vehivavy hendry aho hananganako firenena vanona. Toa mametraka fa andraikitry ny vehivavy ihany no hahavanona ny taranaka handrafitra ilay firenena rahampitso. Fahadisoan-kevitra izany: efa manamarika sahady ny fahavononan'ilay miteny heverina ho lehilahy mihevitra hanorina, hanangana, hanohy izay hahavanona ny firenena izany. Manambara fa tsy vitan'ny lehilahy irery ny manangana io firenena io fa tsy maintsy manana ny anjara toerany lehibe ny vehivavy. Tsy lehilahy sy lehilahy no hiandraikitra amin'ny fanorenana ilay ankohonana fototry ny firenena ary tsy vehivavy sy vehivavy ihany koa fa lehilahy sy vehivavy. Lehilahy iray sy vehivavy iray miara-mibanjina ny hoavy ho an'ny ampitsony sy ny taranany.